Tsiaro ny Pr. Zafy Albert : Tsy tazana ireo akaiky azy -
AccueilRaharaham-pirenenaTsiaro ny Pr. Zafy Albert : Tsy tazana ireo akaiky azy
20/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanatanteraka hetsika ho fahatsiarovana manokana ny nahafatesan’ny Filoham-pirenena teo aloha, ny Pr. Zafy Albert, ny teo anivon’ny Manda ho an’ny Firaisam-pirenena notarihin-dramatoa Lalatiana Ravololomanana, omaly, teny amin’ny Hotel Panorama, teny Andrainarivo. Notsiahivin’izy ireo tamin’izany ny daty nandaozany ny tany, ny 13 oktobra 2017. Nisaona ny firenena tamin’izany. Feno herintaona sahady izany ankehitriny, ary nanaovana hetsi-pahatsiarovana manokana.
Tamin’ny alalan’ny fampirantiana ireo lahatsoratra miresaka azy an-gazety, sy ireo sary nanamarika ny nanaterana ny vata-mangatsiakany tany Betsiaka, ary tamin’ny alalan’ny horonantsary fohy mampiseho ny hetsika sy tolona, ary ny hafatra nataony ho an’ny mpiray tanindrazana izany.
Fa nanamarika iny fotoam-pahatsiarovana omaly iny kosa ny fahabangan’ny sezan’ireo olona akaiky ny Pr. Zafy Albert, toa an-dry Jean Omer Beriziky, praiminisitra tamin’ny Tetezamita, Manoro Régis, minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Miandrisoa Joseph, sns. Ireo olona teo amin’ny sehatra politika ireo anefa dia nitondra ny anaran’ny antokon’ny Pr Zafy Albert, UNDD, nahazoany toerana teo amin’ny Fitondrana. Ankehitriny, tsy nisy tazana nanome voninahitra ny fahatsiarovana azy izy ireo.
Ankoatra izay, nambaran-dramatoa Lalatiana Ravololomanana, izay anisan’ireo akaiky ity Filoham-pirenena teo aloha nindaosin’ny fahafatesana ity, fa ny Pr Zafy Albert no rain’ny demokrasia sy ny fampihavanam-pirenena. Manaraka izany, hoy izy, zavatra roa no nentina nanamarihana ny tsiaro manokana, dia ny tolona niarahan’izy ireo tamin’ity rain’ny demokrasia sy ny fampihavanam-pirenena ity ny voalohany, izay mahakasika ny fametrahana ny demokrasia tena izy, ny tsy fanekena ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, ka nanjakan’ny fanondranana an-tsokosoko tamin’ny andron’ny Tetezamita, ary ny ady amin’ny kolikoly. Ny faharoa indray dia fanorenana ifotony. Noho izany, raha ny fanazavana hatrany, famelomana ny foto-kevitra napetraky ny Pr Zafy Albert sy ny tsiaro azy manokana no natao. “Maro ny lesona azo tsoahina tamin’ireo foto-kevitra nijoroan’ny Filoha teo aloha Zafy Albert. Namela mamy teto amin’ny tanindrazana izy. Izy rahateo ihany koa no namorona ny CRN (Comité de Réconciliation Nationale), izay mbola tsy tafapetraka hatramin’ny nahafatesany”, hoy i Lalatiana Ravololomanana.
Rajaonarimampianina Hery : « Filoha mihaino vahoaka »
Voaporofo fa filoha mihaino vahoaka, ity filoha Hery Rajaonarimampianina ity. Henony ny hetahetan’ny vahoaka fa mila « gare routière » harifomba. Satria tokoa dia « gare routière » feno fotaka sy misavoritaka no nampiasain’ny mpandeha ...Tohiny
Fetifety eny « ambany tanàna » : Tovovavy 618 no voaolana